Ngathi-i-Hebei Binshare New Material Co, Ltd
Hebei Binshare New Material Co., Ltd. izinikele R & D kunye nokuveliswa kweemveliso zamachiza. Sizabalazela ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo kubathengi kwihlabathi liphela. Sinemveliso yethu, iqela lethu, kunye nenkqubo epheleleyo yenkonzo.Kwathi, ukuqinisekiswa komgangatho kukuzibophelela kwethu kubathengi bethu.Ukunyaniseka ngumgaqo wethu, ukwaneliseka kwabathengi kuhlala kusinjongo sethu, siyathemba ngemizamo yethu, ukufumana ukuqonda kwakho !
(1) Iimveliso ezisemgangathweni ezisemgangathweni ezenziwe ngezinto eziphathekayo.
(2) Ukupakisha okuhle nokuqinileyo njengokulungiselela
(3) Phendula imibuzo ngexesha
(4) Imigaqo eyahlukeneyo yokuhlawula iyafumaneka, kubandakanya iT / T, L / C, D / P, West Union ...
Ixesha lokuthumela liya kuba kwiiyure eziyi-12
Zonke iimveliso ziya kube ziqwalaselwe ngokungqongqo kumgangatho wendlu ngaphambi kokupakisha
Iminyaka yamava isinceda ukuba sikunike ezona zithuthi zingcono kunye nasemva kwentengiso
Kwii-odolo ezinkulu, ukuba kuphela unemali, sinamaxabiso. Wamkele uphando kunye nemiyalelo yakho
Umthengi uza kuqala, sinika ixabiso elifanelekileyo, umgangatho ophezulu
imveliso kunye ukuthunyelwa ngokukhawuleza
Ezintle Emva kokuthengisa
Ukuphendula ngokukhawuleza nangokucacileyo kwimibuzo yabathengi. Ukufudumala emva kokuthengisa
inkonzo, siya kunceda ukusombulula iingxaki ekusebenziseni kwakho.
Iziyobisi zizinto ezizodwa ezisetyenziselwa ukuthintela nokunyanga izifo kunye nokubuyisela kunye nokulungisa ukusebenza komzimba. Umgangatho wayo unxulumene ngqo nempilo yabantu kunye nokhuseleko.
Kwizonyango, igumbi elicocekileyo lebhayoloji lihlala lisetyenziselwa ukulawula ukungcola kwe-microbial.Ukwigumbi elicocekileyo lebhayoloji, ezi zinto zingabalulekanga ikakhulu zibunjwe ziibhaktheriya kunye nefungi, ezinobungakanani be-particle ye-0.Ngaphezulu kwe-2um, ubukhulu be-bacterial common size yi-0.More than 5um Imijelo yongcoliseko lwebhayoloji kungekuphela emoyeni, kodwa nangomzimba womntu, kunye nempahla yomqhubi enxulumene nayo.
Inkampani yethu ikugqala kubaluleke kakhulu kukhuseleko lweemveliso. Imveliso egqwesileyo ayinakuhlulwa kwimeko yemveliso ecocekileyo kunye nenkqubo yemveliso esondeleyo negqibeleleyo. Sinendawo yemveliso ecocekileyo nebanzi, izixhobo zemveliso ehambele phambili kunye neengcali ezinezakhono.